Uthini ama-pickle afana nalokhu: i-can of ukhukhamba oqoshiwe, ukhukhamba oqoshiwe, ukhukhamba we-pickle ephusheni
Ukuchazwa kwamaphupho ekhukhamba omuncu
Ukuze ubone amakhukhamba anosawoti ephusheni, yini lokhu? Chaza amaphupho
Ngokuqinisekile, wayengazi ukuthi amakhukhamba aluhlaza akuyona nje isiphuzo esihle, kodwa futhi isibonakaliso esihle kakhulu ekuchazeni amaphupho. Kubonakala sengathi isithombe semifino elula, kodwa empeleni sikwazi ukwenza izinguquko endleleni yokuphila yephupho. Ngakho, i-salted noma ikhukhamba ibonakala ini? Ingabe kufanelekile ukulinda kusukela ekupheleni kwezinguquko ezithile eziqakathekile, uma leli phupho lacatshangwa? Asiqonde!
Yiziphi izincwadi ezahlukene zokuphupha mayelana namakhukhamba ashukile?
Ukuphendukela encwadini yamaphupho yanamuhla, ungaqonda ukuthi lesi sibonakaliso sithembisa ukuvumelana nokuqiniswa kobudlelwane, izindaba ezijabulisayo ezihlobene nezingane emndenini wephupho. Ukudla ephusheni lokhu okukhethwa kukho kusho ukuthi empilweni yangempela wenza izenzo eziningi ezinhle - uzobala.
Thola kabanzi mayelana nokuthi ukhukhamba uphupha ngani lapha .
Esihumushi seNgisi, ungathola futhi izincazelo ezizwakalayo zephupho, okuyiqiniso, zihlobene kakhulu nempilo. Ngokusho kwalokhu kuqoqwa, ukhukhamba olunamanzi noma oqoshiwe luphawu lwezempilo enhle. Uma empilweni yangempela umphuphi uyisisulu kunoma yisiphi isifo, khona-ke uzosheshe alulame. Ngezinhliziyo ezodwa, umhumushi ubikezela ukuthi maduzane bazoba nomndeni.
Ukuhumusha okufanayo okufanayo kungatholakala kuphupho likaMiller ngamakhukhamba aqoshiwe. Ukuchazwa futhi kuyathembisa umphuphi ukukhipha izifo, ukuthuthukisa impilo, kanye nabantu abanesizungu - impumelelo othandweni ubudlelwane. Bamba iqhaza ekukhukheni ukhukhamba - isingeniso esimnandi.
Kubantu abaye babona le ndaba, umuntu omusha angasiza kakhulu ebhizinisini. Kwabesifazane - ubudlova obudlova, okungahamba kahle emiphakathini yomndeni.
Umhumushi kaFreud unikeza ukuhumusha okuthakazelisayo. Ithi ikhukhamba lihlobo lombonakaliso lokuqala komuntu. Amadoda analo iphupho elinjalo ngezinkinga nge-potency, abesifazane - ukunganeliseki nomlingani wabo wobulili. Ukuze udle izindlela ezinjalo zokuphuza kuzokwenza maduzane ukwenza izifiso zobulili. Amakhokheni e-salting ephusheni - une incazelo ejulile yobuhlobo. Zama ukuqonda okhethiweyo wakho, ulalele futhi wenze isiphetho - kuzokukwenza kahle.
Thola nokuthi yini izamatamatisi eziphupha lapha .
Okunye ukuhumusha kwamaphupho amakhukhamba ashukile
Ukubona ephusheni ummbila wamakhukhamba anokethusi kubonisa ukuthi kungcono ukugwema ukuhamba amabanga amade. Futhi ngemuva kwesikhashana ngemuva kokulala, kungcono ubaleke ukuhamba ngemuva kwesondo.
Sebenzisa lolu khekhe njengenye yezithako esitsheni kusho ukuthi uzodunyiswa. Ukudumisa cishe kuzokuhlobene nesitayela sakho noma ikhono lokulima.
Ukondla omunye umuntu ngamakhukhamba anosawoti - lindela ukukhohlisa noma ukuhlambalaza, okuyinto, mhlawumbe, ezovela kulo muntu. Zama ukuboleka imali cishe inyanga.
Ukuthengisa emakethe emakethe ngamakhukhamba ashukile noma anosawoti - ukuthuthukisa inhlalakahle yakho. Ikakhulukazi isibonakaliso esihle ukubona emaphupheni ukuthi unikezwa imali ezandleni zakho. Ukuthenga i-pickle noma noma yikuphi ukulahlekelwa okukhulu, izinkinga zebhizinisi.
Mhlawumbe awukwakhiwa kakhulu, lokho okushiwo yizincwadi zamaphupho ngamakhukhamba oqoshiwe. Kodwa, njengoba bethi: baxwayisiwe, base behlomile. Okungukuthi, ungakwazi ngempela ukuthonya ikusasa lakho ngokwakho, ngakho ungadikibali!
Sifakazela imfihlakalo - ubaba wasekhaya uyaphupha ngani?
Kungani ukukhashelwa kwentombazane?
Iphupho: isiqephu somlobokazi
Ukusajingijolo ukugqoka nge vodka
Ungazenza kanjani uphilile ngokusebenzisa amanzi?
Ungayibopha kanjani ijoka lesikwele?
Ilula kalula kusuka kwesibindi sesilwane
I-cheesecake ene-blackberries, i-raspberries ne-pomegranate
Ukubuyisela umzimba wesifazane emva kokubeletha
Khetha igama lomntwana nge-patronymic